चितवनमा अक्सिजनको अभाव नहुने - नेपालबहस
चितवनमा अक्सिजनको अभाव नहुने
| १२:००:३५ मा प्रकाशित
२० वैशाख, चितवन । कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा अधिक प्रयोग हुने अक्सिजन जिल्लामा अभाव नहुने देखिएको छ । ठूला तीन अस्पतालका आफ्नै अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट रहेका कारण अक्सिजनको अभाव नहुने भएको हो । यसका अतिरिक्त एउटा उद्योग र दुई ठूला सप्लायर्स जिल्लामा रहेका कारण अक्सिजन पर्याप्त रहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीका अनुसार भरतपुर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पतालका आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेका छन् । ती अस्पतालले अहिले कोभिडको उपचार गरिरहेका छन् । यसका अतिरिक्त भरतपुर महानगरपालिका–१ रामनगरमा स्वर्गद्वारी अक्सिनन प्लान्ट रहेको छ । नवलपरासीको परासीमा रहेको शङ्कर अक्सिजन ग्यास र परवानीपुरमा रहेको भाजुरत्नको अक्सिजन ग्यास पनि यहाँ आउने गर्दछ ।
यहाँ उत्पादन भएको ग्यासको ४० प्रतिशत हाराहारी उद्योगमा खपत हुने गरेको छ । अभाव हुँदै गएमा उद्योगमा पठाउने अक्सिजन रोक्न सकिने तिवारी बताउछन । अक्सिजन उद्योगलाई उद्योगमा पठाइएका सिलिन्डर फिर्ता ल्याउन भनिएको छ । तिवारीले भने, “सरसर्ती हेर्दा अहिले हामीलाई अक्सिजनको अभाव हुँदैन ।”
निजी क्षेत्रबाट अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको स्वर्गद्वारी अक्सिजन प्लान्टका निर्देशक निरञ्जन न्यौपानेले जिल्लामा अहिले पाँच हजारभन्दा बढी सिलिन्डर रहेको जानकारी दिए । ठूला ४७ लिटरका र साना १० लिटरका सिलिन्डर बढी प्रयोगमा आउने गरेका छन् । केही मध्यम खालका पनि रहेको उनले बताए ।
सेन्ट्रल अक्सिजन सप्लाई भएकाले धेरैले ठूला सिलिन्डर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले उद्योगमा पठाएका सिलिन्डर फिर्ता मागेको भन्दै उनले भने, “उद्योगबाट सिलिन्डर फिर्ता आइरहेका छन् ।” सो उद्योगले भैरहवा, वीरगञ्जलगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा अक्सिजन पठाउँदै आएको थियो । हाल भने पठाउन रोकिएको उनको भनाइ छ ।
यहाँको भरतपुर अस्पतालमा आफ्नै प्लान्ट छ । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा जगन्नाथ तिवारीका अनुसार ६० प्रतिशत आफ्नै उत्पादनले धान्ने गरेको छ । नपुग निजी क्षेत्रबाट ल्याउने गरिएको छ । दैनिक ५० सिलिन्डर भरेर ल्याउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
अस्पतालसँग एक सयभन्दा बढी सिलिन्डर रहेका छन् । हालै मात्रै प्रदेश सरकारले ४३ सिलिन्डर पठाएको तिवारी बताउछन । एकसय ५० हाराहारी बिरामीलाई अक्सिजनको अभाव नहुने उनको भनाइ छ ।
चितवन मेडिकल कलेजले आफैँ अक्सिनन उत्पादन गर्दै आएको छ । प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रताप देवकोटाका अनुसार ३०० जनासम्मलाई आफ्नै उत्पादनले धान्न सक्छ । अस्पतालमा चालु अवस्थाका र खाली सिलिन्डर जगेडाका रुपमा समेत राखिएको देवकोटाले बताए । उनले भने, “अन्य समस्या नआएमा हामीलाई अक्सिजनको अभाव हुँदैन ।”
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पतालले लगानी गरेको गैँडाकोटको सिद्धिविनायक अक्सिजन उद्योग रहेको छ । सो उद्योगले आफू र अन्य क्षेत्रलाई समेत अक्सिजन बिक्री गर्दै आएको छ । उद्योगको ८० प्रतिशत खपत चितवनमा हुन्छ । यहाँका अस्पताल, एम्बुलेन्स, निजी अस्पताललगायत भाजुरत्न र शङ्कर उद्योगले अक्सिजन उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सरोकारवालाले उद्योग र सप्लायर्सको अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा चिकित्सकको प्रेस्किप्सन विना घरमा सिलिन्डर राख्ने गरी बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी उद्योगमा गएका सिलिन्डर फिर्ता ल्याउन र मेडिकल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।
प्रजिअ प्रेमलाल लामिछानेले तत्कालका लागि जिल्लामा अक्सिजनको अभाव नभएको बताउनुभयो । आफ्नै नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइएको उनले जानकारी दिए । घरमा राखिएका सिलिन्डरमध्ये जगेडामा राखिएकालाई फिर्ता माग्न सम्बन्धित उद्योगी र सप्लायर्सलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए। उद्योगको उत्पादन राम्रो भएको तर बिरामीको चाप बढ्दै गएमा सिलिन्डर भने थप आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
मकवानपुरमा अक्सिजन अभाव हुँदा उपचारमा समस्या २१ घण्टा पहिले
समाजसेवीबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्न सहयोग २ दिन पहिले
वीरको नयाँ भवन अक्सिजन अभावले सञ्चालनमा कठिनाइ ३ दिन पहिले
अस्पताललाई ८ थान अक्सिजन सिलिण्डर प्रदान ३ दिन पहिले
चितवनमा अक्सिजनको अभाव ४ दिन पहिले
बारामा घाँटी रेटेकाे अवस्थामा २ बालकको शव फेला ! ४ मिनेट पहिले
एमाले कार्यदलको बैठक आज बस्दै १४ मिनेट पहिले
बर्दिबासमा सैनिक फिल्ड अस्पताल सञ्चालन २२ मिनेट पहिले
ओलीको सपथविरुद्ध परेका रिट प्रधानन्यायाधीश आफैंले हेर्ने २४ मिनेट पहिले
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ६ घण्टामा ४ संक्रमितको मृत्यु २५ मिनेट पहिले
टोखालाई ३ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग २९ मिनेट पहिले
संसदबाट नीति कार्यक्रम पास नुहुने र वैकल्पिक सरकार पनि नबन्ने देखियो: भट्टराई ४२ मिनेट पहिले
कर्णालीमा एक करोड राशिको पत्रकार कल्याण कोष ४५ मिनेट पहिले
पाँचथरमा जेठ १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा ५३ मिनेट पहिले
पाँचथरका गाउँभरि ज्वरोका बिरामी,अधिकांशमा संक्रमण १ घण्टा पहिले
कोरोनाले सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर आशा चौधरीको मृत्यु १ घण्टा पहिले
दैलेखमा कोरोनाले एउटै समुदायका ९ जनाको मृत्यु १ घण्टा पहिले
कोरोनाबाट जनस्वास्थ्यकर्मी रत्नलाल श्रेष्ठको ज्यान गयाे २ घण्टा पहिले
उपनिर्वाचनमा संक्रमित मतदातालाई छुटै मतदान केन्द्र, कर्मचारीलाई पीपीई ! २ घण्टा पहिले
कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्ने ‘रोबो भ्यान’ बन्दै २० घण्टा पहिले
कोरोनाबाट चितवनमा ११ संक्रमितको मृत्यु २३ घण्टा पहिले
मेची प्रादेशिक अस्पतालका लागी नौ करोड बजेट विनियोजन २ घण्टा पहिले
चन्द्रागिरिमा अक्सिजनसहित ६० श्ययाको आइसोलेशन सञ्चालन २३ घण्टा पहिले
कोभिडको तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने विज्ञको चिन्ता ४ घण्टा पहिले
मैले तिम्रो सत्ता टिकाउन के गर्नु पर्यो ? भन: २० घण्टा पहिले
भेन्टिलेटर र आइसियूका शय्या चाहिए बिएण्डसी जानु २ दिन पहिले
अर्जुनधारा नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाम्याहाङको निधन २ घण्टा पहिले
नेपाल बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन ४ दिन पहिले
चाँगुनारायण अस्पताललाई १० अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग २४ घण्टा पहिले
भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका दुई खैरो हिरोइनसहित पक्राउ ४ दिन पहिले
मोहन विक्रम सिंहलाई कोरोना पुष्टी ७ दिन पहिले
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्याे २ दिन पहिले
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा १७ पदाधिकारी नियुक्त ५ दिन पहिले
जापानमा काेराेनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या दश हजार भन्दा बढी ३ हप्ता पहिले
नेपालमा संक्रमणदर उच्च, सर्वसाधारणलाई सतर्क हुन मन्त्रालयको अपिल ३ हप्ता पहिले
स्थलगत अनुगमनमा निस्किए मुख्यमन्त्री राउत २ दिन पहिले
गिनीको सुन खानीमा पहिरो खस्दा १५ जनाको मृत्यु १ हप्ता पहिले
काठमाडौंसहित देशका धेरै ठाउँमा घाम १ हप्ता पहिले
ओलीबिरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी, माओवादी केन्द्रले आजै सर्मथन फिर्ता लिने ४ हप्ता पहिले
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको ड्याममा पानी भर्न सुरु ३ हप्ता पहिले
जसपाले भोलिसम्म एकीकृत निर्णय गर्ने ६ दिन पहिले
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि अनुशिक्षण २ महिना पहिले
विद्यालय सञ्चालनका लागि महायज्ञ ! २ वर्ष पहिले
बारी छैनः कौसी छँदैछ ! २ महिना पहिले
१४ दिनपछि खुल्यो बेँसीशहर–चामे सडक १० महिना पहिले